अंग्रेजीबाट नेपाली अनुवाद – Vocre
अंग्रेजीबाट नेपाली अनुवाद
एक पेशेवर भर्ना बिना एक अंग्रेजी बाट नेपाली अनुवाद को आवश्यकता छ? चाहे तपाइँ विदेश मा पढ्दै हुनुहुन्छ, ब्यापार को लागी नेपाली सिक्न को लागी कोशिश गरीरहेको छ वा शिक्षा अनुवाद को आवश्यकता छ, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं.
अ to्ग्रेजीलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु अंग्रेजी भन्दा अंग्रेजी अनुवाद भन्दा धेरै गाह्रो मानिन्छ स्पेनिश वा फ्रान्सेली. नेपाली वर्ग मा मानिन्छ4भाषा, यसको मतलब शब्द अनुवाद गर्न पनि त्यस्तै गाह्रो छ, वाक्यांशहरु, र अ ​​from्ग्रेजीबाट नेपालीमा वाक्यहरू जस्तै यो अंग्रेजी देखि ग्रीक वा अंग्रेजीबाट रूसी हो.
शुभ समाचार यो हो कि अंग्रेजीलाई चिनियाँ वा अरबी भन्दा अंग्रेजीमा नेपाली अनुवाद गर्नु सजिलो छ.
को नेपाली भाषा नेपालभरि बोलेको छ र अधिक स्थानीयहरूको पहिलो भाषा हो. त्यहाँ पनि छन् 129 देशमा बोल्ने अन्य भाषाहरू, अधिकांश भारत-आर्यन र चीन-तिब्बती भाषाहरूबाट लिइएको हो.
जबकि नेपाली नेपालको आधिकारिक भाषा हो, देशका अन्य पहिलो भाषाहरूलाई पनि 'पहिलो भाषाहरू' को रूपमा मान्यता दिइन्छ. यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हो, लगभग आधा बासिन्दाहरूले यो बोल्छन्; मैथिली दोस्रो सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हो (यद्यपि यो भन्दा अलि बढी मात्र हो 10% स्थानीयहरुको यो बोल्छ). देशका प्रायः भाषाहरू मर्ने खतरामा छन्, धेरै भाषाहरू देश भर व्यापक रूपले बोलेको छैन.
नेपालीलाई कुनै समय खास-कुरा र गोर्खाली भनिन्थ्यो.
अ to्ग्रेजीलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु केही अन्य भाषाहरूको तुलनामा मुश्किल हो. नेपालीको प्रमुख भाषाहरूमा शामेल छ:
अंग्रेजी र नेपालीले केहि शब्दहरू साझेदारी गर्छन् - मात्र 100 वास्तबमा! यदि तपाईं नेपाली वर्णमाला र उच्चारणसँग परिचित हुनुहुन्छ भने, यी शब्दहरु सिक्न केहि अरु भन्दा सजिलो छ.
नेपाली अनलाइन सिक्ने कोशिश गर्दै? हामी मेशिन अनुवाद सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं जुन एक नेपाली अनुवाद उपकरण छ र सजिलैसँग भाषणमा पाठ अनुवाद गर्न सकिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
नेपाली शब्दकोशमा भन्दा बढी समावेश गर्दछ 150,000 शब्दहरु. ती पत्रहरू देवनागरी लिपिमा लेखिएका छन्, ब्राह्मी लिपिबाट आएको, र आधारित संस्कृत. नेटिभ अ readers्ग्रेजी पाठकहरू यो जान्न खुशी हुनेछन् कि नेपाली बायाँबाट दायाँ पढिएको छ (अ like्ग्रेजी जस्तै). ठूला अक्षरहरू तल्लो केस अक्षरहरूमा जस्तै लेखिएका हुन्छन्.
अंग्रेजी नेपाली अनुवादकहरू र अनुवाद सेवाहरू प्राय: प्रायः चार्ज गर्दछन् $50 एक घण्टा. यदि तपाईं सरल पाठ अनुवाद गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, हामी एक भाषा अनुवाद सफ्टवेयर कार्यक्रम वा अनुप्रयोग मा पाठ inputting सिफारिश.